बारेकोटमा खाद्यान्‍न अभाव – Yug Aahwan Daily
Friday 27th May 2022/
सिम्तामा १३ सय ५० विपन्न घरधुरीलाई बाख्रा र वोका वितरण
आत्मरक्षा विषयक तीन दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सुरु
सिम्ताका १३ सय ५० विपन्न घरधुरीलाई बाख्रा वितरण
सुर्खेत-दैलेख जिल्ला समन्वयमा बहुमत नपुग्दा सकस
सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते
पेट्रोलियम पदार्थको कर १० रुपैयाँले घट्ने
रुस-युक्रेन युद्धका कारण बाध्यात्मक मूल्यवृद्धि : आपूर्तिमन्त्री बडू
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा लोकप्रियताको भोकले वडामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा
पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउने गर्नुस्, पेट दुखेको ठीक हुन्छ
महाभारतको युद्ध किन कुरुक्षेत्रमा नै लडिएको थियो ?
बारेकोटमा खाद्यान्‍न अभाव
युग संवाददाता । १८ माघ २०७६, शनिबार १८:४४ मा प्रकाशित
366 पटक हेरिएको
जाजरकोट : जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ । बारेकोट गाउँपालिकाको नायकवाडास्थित घाट डिपोमा चामल सकिँदा गाउँपालिकामा खाद्यन्न अभाव भएको हो । डिपोमा चामल ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारले समयमा चामल ढुवानी नगर्दा खाद्य संकट भएको हो ।
बारेकोट क्षेत्र कर्णालीका जुम्ला र डोल्पासँग सिमाना जोडिएको जिल्लाकै दुर्गम गाउँपालिका हो । यहाँ बर्षेनी खाद्य संकट हुने गर्दछ । खाद्य संकट टार्न सरकारले यो वर्ष दुई हजार पाँच सय क्विन्टल चालमको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
सडक सञ्जालले नछोएपछि यहाँ घोडा र खच्चडबाट चामल ढुवानी हुन्छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमा शाहीले स्थानीय पसलमा उपलब्ध चालम संस्थानको भन्दा दोब्बर महंगो हुँदा स्थानीय किनेर खानसक्ने स्थितिमा नभएको बताइन् ।
गाउँपालिकामा यातायात सुविधा नहुँदा ढुवानीका लागि घोडा खच्चड प्रयोग गर्दा मूल्य बढी पर्ने भएकाले ठेकेदारले चामल ढुवानी नगरेका हुन् । चामल ढुवानीको जिम्मा लिएका एनवी विल्डर्सका प्रतिनिधि मानबहादुर खड्काले खाद्य संस्थानबाट चार सय ५४ क्विन्टल चामल बुझेर लगेका छन् ।
खाद्य संस्थान जाजरकोट शाखाका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई बारम्वार ताकेका गरिरहेको बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ठेकेदारलाई कारवाहीका लागि छलफल भएको छ ।
अन्तिम मौका दिने र यो महिनाभित्र चामल ढुवानी नभए ठेकेदारलाई कारवाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । ढुवानीको जिम्मा लिएको एनवी विल्डर्सले असारभित्र सबै चामल ढुवानी गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकाले सोही अनुसार चामल ढुवानी गरिने बताएको छ ।
युग आह्वान राष्ट्रिय दैनिकद्वारा सञ्चालित
सूचना विभाग दर्ता नं.: २३६७/२०७७/०७८
दैलेखः अमर सुनार
कालिकोटः प्रशुराम पाण्डे
भेरीगंगाः दीलिप ढकाल
त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, दुनै, डोल्पा
सम्पर्क नम्बरः ०८३-५२१६२७, ९८५८०५५६२७, ९८५८०५२८१०